आकाशेपुलमा हुँने रहेछ सबै चकित हुने यस्ता कार्य, यसरी चल्दा रहेछन् यस्ता कार्यका बार्गेनिगंहरु — Imandarmedia.com
आकाशेपुलमा हुँने रहेछ सबै चकित हुने यस्ता कार्य, यसरी चल्दा रहेछन् यस्ता कार्यका बार्गेनिगंहरु
काठमाडौं । देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी र गरिबीले जनता हैरान भएका छन् । मान्छेहरु बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका ठुला शहरहरुमा मान्छेहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तै, काठमाडौं शहर , हेर्दा रहर लाग्छ धेरैको त सपनाको शहर पनि हो । तर रहर मात्र नभई हरेक पलपलमा यहाँ मान्छे आफ्नो जिन्दगीलाई कुनै नँया दिशा दिने झिनो आशाका लागि धेरै मेहनत गरिरहेको छ ।
यहाँ दुःख गरेर सफलता पाएकाहरु पनि छन् । सुन्दर सपना देखेर काठमाडौंको खाल्डोमा संर्घषशील जीवन बिताउने धेरै आगान्तु व्यक्तिहरु काठमाडौंमा पाइन्छन् । कोही सडकका पेटीमा त कोही गाडीको ढोकामा, कोहि होटलका रछ्यानमा त कोहि ग्राहकका ओछ्यानमा एकछाक टार्नको लागि ज्यान बे’च्नसम्म पछि पर्दैनन् । आफ्नो सुन्दर सपना भन्दा पनि कसरी बाँच्ने भन्ने ठुलो समस्या शहरमा छ ।
सडक पेटीमा संघर्ष गरिरहेका मान्छेहरु अपमान पनि उस्तै सहनुपर्छ । कहिले सरकारले प्रशासन प्रयोग गरेर पेटीबाटै उठाउने गर्छ । केही सामान बोकेर जीवन गुजारा गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कहिलेकाँही डोजरसम्म चलाएका घटनाहरु बाहिर आउँछन् । काठमाडौंका व्यस्त गल्लीहरुमा के हुन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नै हुँदैन । यस्तै मध्य रत्नपार्क, बसपार्क, कलंकी, चक्रपथ लगायतका क्षेत्रहरुमा अ’वैध यौ’न ध’न्दा हुने गरेका कुराहरु पनि समयसमयमा बाहिर आउँने गरेका छन् । काठमाडौंमा भएका पुलहरु मान्छेहरुको सहजताका लागि मात्रै नभई स’न्तुष्टिका लागि पनि प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
पुलमा बसेर मान्छेहरु मान्छेको व्यापार गरिरहेका हुन्छन् । एक रा’तको कति ? वा एकपटकको कति ? यी त अति सामान्यजस्तै भैसकेका छन् । विमानस्थल छेउछाउमा पनि यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् । सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा चुकेको देखिन्छ । खाजा घरका नाममा ध’न्दा भइरहेको छ । काठमाडौंमा मात्रै होईन नेपालका प्रमुख शहरहरुमा यो व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । मान्छेहरु अरु भन्दा यस्लाई केही सहजजस्तो मान्छन् । एका तिर सरकार यस्लाई कानुनी मान्यता दिएर राजश्व असुल गरोस भन्नेहरु पनि छन् । अर्को तिर यस्लाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । जनबोलीबाट लिइएको ।